Oromoon biyya keessa jiru bakka jiruu qabsoof wal gurmeesu qaba !!!
Haala amma biyya keessa jiru kanati dhaabbileen biyya ala jiran ykn Actvistoon biyya ala jiran hojii biyya gegesuu ykn hojeechuf hin danda’aan, gurmeesuu ilee hin danda’an. Sababin isaa biyya ala ta’ani biyya kessatti nama to’achuu waan hin dandeenyef. Waan to’achuu hin dandeenye ammoo gurmeesani bobasuun rakko dha, kan biyya ala tesee gurmeesite kani Hoolaa kani Waangoo (Yeeyyii) ta’an wal nyatani walfixuu dhanda’uu.
Girma Xurana Basasa wayyanneti jedhe garii tokko yamuu iyyatuu garii tokko ammoo qabsa’aa dhugati jedhee wakkataf. Rakko kana maltuu fidee yoo jeetan biyya ala ta’aan biyya keessatti qabsoo gegesuu ykn Ogannun siirii akka hin tanee fi ofi nagaan biya ala jiratani lammii ofi diinaf saxiluu argisisa. Qabsoon kan gegefamuu qabuu namicha diiree qabsoo uummaticha keessa jiruun ta’uu qaba. Isaatuu beelaa fi rakko arga jira, rakko uummataa ilee isaatuu beekka, ofi ilee rakko keessa waan jiruf qabsoo sun akka arifatuu halkan fi guyyaa irratti hojeeta. Nama isaa bira jiruu ilee siiritti to’ata. Sochii diina guyya guyyan to’ataa, lubuu isaa fi saba isaa bira jiruuf jeecha diina irratti tarkanfi ciimaa fudhata.
Oromiyaan biyya guda waan ta’eef Qabsoo biyya keessatti bosona fi magaalaa keessatti gegesuun ni danda’ama. Biyii xinnoon akka Palastaini fi Shirii Lanka faa iyuu biyyuma xinnno sana keessatti Hamasi lafa jala, Tamili Ta’iger ammoo bishan keessa dhokatani qabsoo gegesaa turan. Keenya maltuu kana dhorkee bara 2005 yeroo WFDO fi KBO kara nagaa falmatan uummata amansifatan Garee fi Gooxiin meesha uummataaf deebisee ittin lola jeedhe namni Bosona dhufee qawee fudhatuu dhibee. Hussen Indirsii nami jeedhamu qoofa isaa Gimbi keessatti TPLF lolee warregame.
Hojiin Qeerroon barartoon Oromoo gegesaa jiran kun kan nu mirkanesuu qabsoon biyya keessatti yoo gegefamee qoofa akka bu’aa busuu dha. Kanaafuu, dargagoon Oromoo akka wal beeku fi wal amanuti ganda isaa fi aannaa isaa keessatti wal gurmeese diina irratti qabsoo gegesuu qaba malee diaspora “dhaabbilee biyya ala” irra waan eguu tokko ilee hin qabu. Diasporan biyya ala jiruu ABO gootoon Oromoo Baroo Tumsa faa ijjaran Qootee bulan Oromoo gargaree jirachisa ture bara 2008 Konyan ABO Amerika kaabba labsiidhan diigan, dhaabba Oromoon warreegama guda itti kafalee Ginbot 7 jala galchani, kani ammo Minisootatti wal gurmessan Kayyoo ABO lagachuun TPLF waliin hojeechuuf murtefatan, kanaafuu, Diasporan seena qabsoo Oromoo keessatti badii seenan hin daganee ka’ee jira. Biyyaa kessatti qabsoon bilisuumma Oromoo fi wallabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf dargagoon Oromoo gegessa jiran degeruu qofaatu Oromoo abba biyyaa godha.
Biyya ala ta’ani namni qabsoof gurmeesan harki caaluu diinaf saxilamuu, sababin isaa yeroo nu isaan gurmsinuu diini hordofee qabe hidha ykn akka inni isaaf hojeetu goodha. Kan nama dhibuu ammo dhaabbilee Oromoo ilee isaa tokko gurmeese qabsootti bobasuu inni biran ammoo diinaf akka saxiiluu ykn caasaan sun akka diigamu gochuun gantuma gudadha. Nama qabsoo Oromoo irraa jiruu dhaabba kami jalatuu haqabsa’uu diinaf saxiluun yakka gudadha kan dhiifama hin qabnedha. Dhaabbii Jijjirama bara 2008 Miseensoota ABO biyya ala jiruu utuu hin haafin ajjeesisee kan biyya keessa jiran ammoo TPLF akka rukkutuu goochun seena gadhee hojjeete darbeera. Waan kana fakatuu yeroo amma Miseensoota WFDO irratti rawwatama jira. Waan nama gadisisuu biyya keessatti qabsa’oota waraa cimmoo ta’aan irratti bobo’ani hisiisaa fi dararama gudaa irratti raawwacha jiru, midia sabqunamttin diasporan ofi qusannoo tokko malee iciitii qabsaa’oota biyyaa kessa gadi basani facasaa jiru. Qabsa’oon WFDO ifa fi harka lafa jalan qabsoo irra jiran yeroo hunda bakka hundati qabamani hidhama jiru, daragagoon WFDO fi OFC hidhama jiru enyutuu kana hojeecha jira? of egadha dhugaan ni turtti malee ifa batii.